လာမဲ့နှစ် ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ ကျင်းပမဲ့ ကမ္ဘာ့ဂျူဂျစ်ဆု ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ MMA ( Mixed Martial Art ) မှာ အဆင့် ၁၇၈ ရှိသူ အောင်လနှင့်စကားစမြည်မေးမြန်းချက်
လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးဂျာစီပြည်နယ် အတ္တလန်တစ် စီးတီး (Altantic City, New Jersey) မှာ ကျင်းပမဲ့ အသုံးချ
ကိုယ်ခံပညာ တိုက်ခိုက်ရေး လောက ကြေးစားလက်ဝှေ့ပွဲစဉ် အမှတ် R.O.C ( Ring of Combat – 38 ) အတွက် MMA ( Mixed Martial Art ) မက်ဒယ်လ် ဝိတ်တန်းရှင် အင်ဆန် အောင်လ ကို Read more »
အောက်တိုဘာ လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး ကို တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ စုပေါင်းကာ ကျောင်းသားများ ဘဝလုံခြုံရေး ဆန္ဒပြမည်
အတွင်းရှိ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ ဘဝလုံခြုံမှု ရရှိရေး အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် (၁၇) မြို့နယ်မှ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ စုပေါင်းကာ စစ်တွေမြို့ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး ကို အောက်တိုဘာ လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ် သွားမည ဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေ တက္ကသိုလ်
ကျောင်းသားများ ထံမှ သိရှိရသည်။
10/19/2012 09:51:00 PM
တကျော့ပြန်လာနိုင်သည့် ရခိုင်-ဘင်္ဂလီ အရေး အခင်း
ယခုအခါ စစ်တွေမြို့ပေါ်တွင် AZG ရုံးများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ အသည်းအသန် ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ ရခိုင်-ဘင်္ဂလီ အရေး အခင်းအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေပါဝင်နေတဲ့ အန်ဂျီအို ၀န်ထမ်းများ ဘင်္ဂလီဝန်ထမ်းများ ကြီးစိုးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှ အစပျိုးခဲ့ကြပါတယ်။
10/19/2012 09:46:00 PM
မြန်မာနိုင်ငံကို အမေရိကန်က အခိုင်အမာ ထောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟီလာရီကလင်တန်ကပြော
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အင်စတီ ကျူးရှင်းတွေက မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီ ပေးတဲ့အပေါ် ထောက်ခံသွား မယ် လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟေလာရီ ကလင်တန် က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
10/19/2012 09:09:00 PM
အရပ်သားထိန်းချုပ်သည့် စစ်တပ် ဖြစ်ရေး အမေရိကန်နှင့် မြန်မာ ဆွေးနွေး
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး လက်ထောက် ၀န်ကြီးနှင့် အမေရိကန်စစ်တပ်မှ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး အရပ်သား ထိန်းချုပ်သည့် စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍ အပါအ၀င် အမေရိကန် စစ်တပ် အတွေ့အကြုံများကို ရှင်းလင်း ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိ ကန် သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ်က
10/19/2012 09:07:00 PM
စက်သုံးဆီ တန်ချိန် ၃၈,ဝဝဝ ကျော် တင်သွင်းရန် စီစဉ်နေ ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီ ဈေးကွက်အတွက် ဓာတ်ဆီနှင့် ဒီဇယ် စုစုပေါင်း တန်ချိန် ၃၈,ဝဝဝ ကျော် ကို ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများမှ တဆင့် တင်သွင်းရန် ရှိကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တဆင့် သိရှိရသည်။
10/19/2012 09:06:00 PM
အိန္ဒိယမှ မြန်မာသို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗုဒ္ဓလက်ဆောင် လှူဒါန်းမည် နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရွှေတိဂုံဘုရားတွင် တည်ထားပူဇော်နိုင် ရန်အတွက် ဉာဏ်တော် ၁၆ ပေရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် တဆူကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ‘ငြိမ်းချမ်းရေး လက်ဆောင်’ အဖြစ် ပေးပို့ လှူဒါန်းမည်ဟု သိရှိရသည်။
10/19/2012 09:04:00 PM
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံက မြောက်ကိုရီးယားဘက်မှ တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်မှုဆန်သော အပြုအမူ အားလုံးကို တုံ့ပြန်သွားမည်ဟုပြောကြား
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံက မြောက်ကိုရီးယားဘက်မှ တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်မှု ဆန်ေ သာ အပြုအမူ အားလုံးကို တုံ့ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
တောင်ကိုရီးယား ကာ ကွယ်ေ ရး ဝန်ကြီးက ပြောကြားလိုက်သည်။ ဝန်ကြီး ကင်မ်ကွမ်ဂျင် က သော ကြာေ န့ တွင် မိမိတို့သည် ပြုံယမ်းအခြေစိုက် မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရဘက်မှ ခြိမ်းခြောက်ရန်မူသော အခြေအနေတိုင်းကို တုံ့ပြန်မည်ဟု အတည်ပြုခဲ့ သည်။
10/19/2012 08:52:00 PM
ရန်ကုန်မြို့တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသံအမတ်ကြီးဒဲရစ်မစ်ချယ်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သံအမတ်ကြီးဒဲရစ်မစ်ချယ် သည်ရန်ကုန်မြို့ရှိအမေရိကန်သံရုံးတွင် အာက်တိုဘာလ၁၉ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
10/19/2012 08:44:00 PM
ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာသံဃာ့ညီညွတ်ရေးအစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့ညီညွတ်ရေးအစည်းအဝေးကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ ဒက္ခောင်းကျောင်းတွင် (၁၈-၁၀-၂၀၁၂)ရက်နေ့ က အောင်မြင် စွာကျင်းပပြီးစီးသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဘန်ကောက်ကို တရားမ၀င်အလုပ်သွားလုပ်မယ့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၂ ဦး နယ်စပ်မှာဖမ်းမိ
ဘန်ကောက်မြို့မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်ကနေ တဆင့် သွားရောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၂ ယောက်ကို ဒီကနေ့ ဖမ်းမိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Read more »
10/19/2012 06:15:00 PM
20.10.2012 ရက်နေ့ ရမ်းဗြဲမြို့နှင့် ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည်
လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတရပ်ကို ၂၀.၁၀.၂၀၁၂ ရက် နံနက် ၉း၀၀ နာရီတွင် စုဝေးပြီး OIC အပေါ်ကို သမ္မတကြီး၏ တုန့်ပြန်ချက် အား ထောက်ခံမှု ၊ UN အဖွဲ့နှင့် တွေ့သောအခါ သမ္မတကြီး မှ တောင်းဆိုချက်ကို အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ရန်တို့ ကို တောင်း သွား မည်ဟု သိရှိရပါသည်။
10/19/2012 02:53:00 PM
ဝန်ကြီးဌာနများမှ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအလိုက် အမည်းစာရင်း ထပ်မံပယ်ဖျက်ပေးဖို့ရှိကြောင်း သမ္မတရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက ပြော
မကြာခင်မှာ ဝန်ကြီးဌာနတွေမှ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအလိုက် အမည်မည်းစာရင်း ထပ်မံပယ်ဖျက်ပေးဖို့ရှိတယ်
လို့ သမ္မတရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေး က ပြောပါတယ်။
10/19/2012 02:50:00 PM
အာရှတွင် အကြီးဆုံး အက်ပဲလ်လက်လီအရောင်းဆိုင် ပေကျင်းမြို့၌ ဖွင့်လှစ်
အက်ပဲလ်ကုမ္ပဏီသည် အာရှတွင် အကြီးဆုံး လက်လီအရောင်း ဆိုင်ကြီး ဖြစ် သည့် အက်ပဲလ် ဆိုင်သစ် တစ်ဆိုင်ကို တရုတ်နိုင် ငံ
ပေကျင်းမြို့၌ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်သွားရန် စီစဉ်ထားေ
အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ဆိုင်သစ်ကြီးသည်
10/19/2012 02:38:00 PM
ပြည်ပကခေါ်တဲ့ဖုန်း ပြည်တွင်းနံပါတ်နဲ့ ပေါ်လာရင် လိုင်းပိတ်မည်
ပြည်တွင်းဖုန်းတွေ ခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံခြားနံပါတ် မဟုတ်ဘဲ ပြည်တွင်းဂျီအက်စ်အမ်နံပါတ်နဲ့ ဝင်လာရင် အဲသည်ဝင်လာတဲ့ နံပါတ်နဲ့ ဖုန်းတွေကို အရင်က အစဉ်အလာအတိုင်း လိုင်းပိတ်မှာ ဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန ဆက်သွယ်ရေး သင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးကျော်စိုးက
10/19/2012 02:31:00 PM
ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရဲ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကတင်ပြတဲ. ပါတီဦးဆောင်တာဝန်ယူမည်.သူများ စာရင်း ထွက်လာပါပြီ
ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရဲ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ က တင်ပြ တဲ. ပါတီဦးဆောင် တာဝန်ယူမည်.သူများ စာရင်း ထွက်လာ ပါပြီလို.သိရပါတယ်။ ပါတီ ဥက္ကဌ အဖြစ် -ဦးသိန်းစိန် ဒုတိယ ဥက္ကဌ -သူရဦးေ၇ွှမန်း ( ပါတီ ဥက္ကဌက တာဝန်မထေမ်းဆောင်နိုင်တာကြောင်. ဦးေ၇ွှမန်းက ဥက္ကဌတာဝန်ပူးတွဲ ထမ်းဆောင်ပါမယ်)
10/19/2012 01:55:00 PM
ဆီးရီးယားလေတပ် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၄၀ ထက်မနည်းသေဆုံး ဆီးရီးယား အစိုးရ လေတပ်၏ ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း လူ(၄၀)ထက် မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဒေသများတွင် ဗုံးကြဲမှုများကြောင့် ကလေးများ အပါအဝင်(၄၃)ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဆီးရီးယား လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများ က ပြောကြား သွားခဲ့သည်။
10/19/2012 01:46:00 PM
သြစတြေးလျ နိုင်ငံက Woodside Petroleum လို့ ခေါ်တဲ့ လောင်စာကုမ္ပဏီကြီးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေနံနဲ့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းတွေကို တောင်ကိုရီယား ဒေ၀ူး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးနဲ့ တွဲပြီး လုပ်မည်
သြစတြေးလျ နိုင်ငံက Woodside Petroleum လို့ ခေါ်တဲ့ လောင်စာ ကုမ္ပဏီကြီးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေနံနဲ့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းတွေ ကို တောင်ကိုရီယား ဒေ၀ူး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးနဲ့ တွဲပြီး လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ Read more »
10/19/2012 01:36:00 PM
ရွှေမြွေဟောက် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု တွင် မြန်မာ စစ်တပ် လေ့လာသူ အဖြစ် ပါဝင်ရန် အမေရိကန် ကမ်းလှမ်း
အာရှဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန် နှင့် မဟာမိတ်နိုင်ငံ များ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေ
ကျ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ယခုနှစ်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ က လေ့လာသူ အဖြစ် ပါ ၀င်ရန်
အမေရိကန် က ကမ်းလှမ်းထား သည် ဟု ရိုက်တာ သတင်း ဌာန က သီးသန့် ရရှိ
သည့် သတင်း တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မိတ္ထီလာခရိုင်၊ မလှိုင်မြို့နယ်ပိုင် ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကားတစ်စီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း မကြီးေ ပါ် ၌ အောက် တိုဘာ ၁၄ ရက် နံနက် ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ကားမီးလောင်သောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာမှ လာရောက် စစ်ဆေးစဉ် မူးယစ်စိတ်ကြွဆေးထုပ်များကို တောစပ်တွင်ဖွက်ခဲ့၍ ယာဉ်ပေါ်ပါလူများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
10/19/2012 12:30:00 PM
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ပြည်တွင်းမီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံမည့် အစီအစဉ် ထပ်မံပြောင်းလဲခြင်း
ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီးနှင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးတို့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ချက်အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် သတင်းမီဒီ ယာများ တွေ့ဆုံမည့် အစီအစဉ် ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲ လိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော်
သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး က စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်မင်းဆွေထံ လွန်ခဲ့ သော မိနစ်ပိုင်း အတွင်းက အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။
10/19/2012 12:16:00 PM
ယနေ့နံနက်(၈း၃၀)အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိမဏိရတနာ ကျောက်မြတ်ရတနာပြတိုက်၊ေ ကျောက်မြတ်ပြပွဲခမ်းမတွင်သတ္တုကဏ္ဍဖွံဖြိ်ုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကျင်းပ ပြုလုပ်
ယနေ့နံနက်(၈း၃၀)အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိမဏိရတနာ ကျောက်မြတ်ရ တနာ ပြတိုက်၊ကျောက်မြတ်ပြပွဲခမ်းမတွင်သတ္တုကဏ္ဍဖွံဖြိ်ုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
10/19/2012 12:09:00 PM
Forum 2000 အကြံပေးအဖွဲ့တွင်ပါဝင်လာကြသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လားမား
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လားမား တို့ဟာ Forum 2000 အဖွဲ့ရဲ့ နိုင်ငံတကာ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်လာကြပြီလို့ Fo
rum 2000 အဖွဲ့က ကြာသပတေးနေ့မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Read more »
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် နယူးစ်ဝိခ် မဂ္ဂဇင်းအား ယခုနှစ်ကုန်မှစ၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုရပ်ဆိုင်းတော့မည်
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် နယူးစ်ဝိခ် မဂ္ဂဇင်းအား ယခုနှစ်ကုန်မှစ၍ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဟု သိရသည်။
နယူးစ်ဝိခ်အား ၁၉၃၃ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ကမ္ဘာကျော် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း နှင့်အပြိုင်ထိပ်တန်း သတင်းများ တင်ဆက်နိုင်မှုကြောင့် ပရိတ်သတ်သန်းပေါင်းများစွာ၏ အားပေးမှုရရှိခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိန္ဒိယကို လာမည့် နိုဝင်ဘာလတွင် သွားရောက်မည်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လာမယ့်
နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံကို သွားရောက်မှာဖြစ်
မစ်(စ်) မြန်မာ ရှမ်းပအို့တိုင်းရင်းသူလေး နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုပြိုင်ပွဲဝင် သဘောထား (နန်းခင်ဇေယျာနှင့်အမေးအဖြေ)အပြည်အစုံ
နန်းခင်ဇေယျာ = ပထမ စရောက်စ ... စစချင်း ဆိုရင် မြန်မာဆိုတာ ဘာမှန်းေ တာင် ရှိမှန်းမသိဘူး၊ အခုက မြန်မာနိုင်ငံ
က လူတွေ က အင်တာနက်မှာ Vote လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကများတော့ သူများတွေက မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားလာတယ်။ မြန်မာအ၀တ် အစား က အစ စိတ်ဝင်စားလာတယ်။ အဲဒါတွေကတော့နော် ... ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာအတွက်က ဂုဏ်ယူစရာပေါ့။
10/19/2012 10:08:00 AM
ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာဝီလျံ ဂျိုးဇက်ဘန်းနှင့် သူရဦးရွှေမန်းတို့တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကော်မတီ
များမှ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ အတွင်းရေးမှူးများနှင့် လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အတူ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးမစ္စတာဝီလျံဂျိုးဇက်ဘန်းအား နေပြည်တော်ရှိလွှတ်တော်အဆောက်
အအုံ ဇမ္ဗူသီရိ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
10/19/2012 09:46:00 AM
Tablet မူပိုင်ခွင့် တရားစီရင်မှုတွင် Apple က Samsung ကိုရှုံးနိမ့်
Samsung ကုမ္ပဏီ၏ Galaxy tablet သည် iPad ၏ဒီဇိုင်းကို ကူးချထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ဗြိတိန်တရားရုံးက စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့သဖြင့် tablet မူပိုင်ခွင့် တရားစီရင်မှုတွင် Apple Inc က ရှုံးနိမ့်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
10/19/2012 08:53:00 AM
ခေါ်ဈေးအောက် လျှော့ရောင်းနေရသည့် မန္တလေးမြေဈေးကွက်
မန္တလေးအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်မှာ အမြင့်ဈေးဖြင့် အရောင်းအ၀ ယ်မြင့် တက်ခြင်းမရှိပဲ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်လိုသူများကအမေးသာရှိပြီး အ၀ယ်အေး
ကြောင်း၊အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်ရန် ခေါ်ဈေးေ အာက် လျှော့ ရောင်းနေရကြောင်း မန်းအိမ်ခြံမြေပွဲစားတို့က ဆိုသည်။ Read more »
သံတွဲမြို့တွင် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် များကို က.ည.န အဖွဲ့က မတရားငွေတိုး ကောက်ခံနေ(ပေးစာ)
ဗျာ .. ပြည်သူများအမှန်တစ်ကယ်ခံ
တို့၏ လုပ်ရပ်များကို တာဝန်ရှိသူများသိရှိစေလိုပါသဖြင့် ယခုပို့ပေးသောသတင်းကို ရွှေမြန်မာ မီဒီယာတွင်
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် အမေရိကန် ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံ
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန် ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး William J. Burns ဟာ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ မြန်မာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်
10/19/2012 12:38:00 AM
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကြမ်း လွှတ်တော်မှာဆွးနွေးမည် ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်း အဝေးတွေကို မနက်ဖြန် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ပြန် လည် စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခါ လွှတ်တော် စည်းဝေးပွဲတွေ ကျရင် နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးကြ မှာ
ဖြစ် သလို အတည်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပြင် Read more »
10/19/2012 12:36:00 AM
ဥပဒေအချို့ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ပယ်ဖျက် ပထမအကြိမ် လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေ ပြန် လည်စတင်တဲ့ နေ့မှာပဲ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကနေအတည်ပြု ထား တဲ့ ဥပဒေ ၄ ခု ဖျက်သိမ်းရေး ဥပဒေကြမ်းတွေ ကို
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကလဲ ဖျက်သိမ်းကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါ တယ်။
10/19/2012 12:34:00 AM